Fivoriana tany Davos, Suisse : nanaporofo ny tanjany sy naneho ny toerany i Inde | NewsMada
Fivoriana tany Davos, Suisse : nanaporofo ny tanjany sy naneho ny toerany i Inde
Fotoan-dehibe ny fivorian’ireo firenena matanjaka maneran-tany momba ny toekarena atao any Davos, Suisse. Ny 23 janoary, nisokatra ny andiany faha-48 amin’izany fihaonana izany nifanatrehan’ireo filohan’ny firenena goavana. Raha tamin’ny taona 2017, naneho ny maha izy azy ny firenena sinoa, tamin’ny alalan’ny filohany Xi Jinping fa tamin’ity taona ity kosa, somary tsy nampoizin’ny maro ihany, ry zareo Indianina indray, tamin’ny alalan’ny Praiminisitra Narendra Modi, ny nanaporofo ny tanjany ara-toekarena eo anatrehan’izao tontolo izao, nanoloana ireo mpandraharaha, filohana fikambanana iraisam-pirenena, sns, maherin’ny 3000.
Ny tena marina, te hilaza ry zareo Indianina fa tsy matahotra mifaninana amin’ny Sinoa. Nasongadin’i Narendra Modi tamin’io fotoana io, fa raha 400 miliara dolara ny harinkarena faoben’ny firenena indianina, ny taona 1997, amin’izao fotoana izao izany efa tafakatra 2.400 miliara dolara ! Tarehimarika manambara fa manana ny lanjany ny fireneny ankehitriny amin’ny toekarena eran-tany. Inde, izay firenena nandalo fotoan-tsarotra tany amin’ny 30 taona lasa, tsy nahavelona ny mponina anjatony tapitrisa maro tany aminy.
Mety ho voalohany maneran-tany ny taona 2050
Nanomboka niova ny zava-misy any Inde rehefa nisafidy niditra amin’ny fanatontoloana ny fitondrana ny taona 90. « Fitaovana sy orinasa » nampiasain’i Chine i Inde tamin’izany fotoana izany. Misongadina ny vokatr’izany ankehitriny, tsy latsaky ny 7 % ny fitombon’ny harinkarena nanomboka ny taona 2014 ary amin’izao taona 2018 izao, fahadimy amin’ny tanjaka ara-toekarena maneran-tany i Inde, manoloana an’i Frantsa sy i Angletera. Mifaninana amin’i Chine eo amin’ny laharana faharoa izy, ny taona 2030, ary mety ho voalohany maneran-tany ny taona 2050.
Nisongadina izay fahombiazan’i Inde izay nanomboka nahavoafidy ny Praiminisitra Narendra Modi, ny taona 2014. Tsy nitsahatra nanavao ny politika momba ny toekarena any aminy io praiminisitra io, nisarihana vahiny mpampiasa vola. Nandritra ny lahateny nataony tany Davos, nohamafisiny hatrany ny fanavaozana any aminy sy ny fahavononany misokatra amin’ny rehetra ary manohitra ny tsy fisokafana. Filazana mazava tsy fankatoavana ny politikan’ny filoha amerikanina, Donald Trump. Fehiny, miaro ny fanatontoloana sy fisokafana amin’ny rehetra ny Praiminisitra indianina, Narendra Modi.